Xasuus-badnaan (Hyperthymesia): Cudur mise Caafimaad? – Cabdicasiis Guudcadde
January 22, 2016 May 18, 2018 Guudcadde
Xasuus-badnaan (Hyperthymesia): Cudur mise Caafimaad?
Ma xasuusataa meeshii aad ku sugnayd iyo wixii aad ka qabanaysay toban iyo shan (15) gu’ ka hor? Deegaanka iyo cimiladu sidee ayay ahayd? Maalinma ayay ahayd? Dhar noocma ah ayaa aad gashanayd? Yaa ku wehelinayay? Wayddiimahan ma ka jawaabi kartaa, si daacad ah?
Waxba ha ka werwerin, anigaygan ku warsanayaaba ma xasuusto! Wax aan suuragal ahayn ayay dadka ula muuqatay in maskaxdeennu awooddo in ay xasuusta dib ugu celiso sebenno sidaa u durugsan, soona celiso warbixin waafi ah oo ku saabsan xilliyo cayiman, oo si cad u qeexan, oo tagtadii ah, wixii ka horreeyay 2006-dii oo ahayd waqtigii laga soo saaray warbixintii u durugsanayd ee dadka sifayaasha caynkan ah leh.
Dad tiro-yar oo dunida ku nool ayaa akhriste itaal u leh in ay xasuustaan wax kasta, ugu yaraan, oo ka dhacay taariikh-nololeedkoodii. Waxa ay ahayd sannaddii 2000 markii gabadh u dhalatay dalka Maraykanka oo la yidhaahdo Jill Price ay xidhiidh la soo samaysay aqoonyahanno ku takhasusay aqoonta Dareenwadka (neuroscience) oo uu hoggaaminayo James McGaugh, oo ka tirsan jaamacadda University of California, Irvin. Uma ay soconin wax kale, ee waxa ay damacsanayd in la ‘caawiyo.’ Waxa ay marwo Price ka cabanaysay xasuusaha tagtadeedii oo si baahsan ugu soo noqnoqonayay, waxa ay sheegatay in ay u muuqanayaan xataa maalintii waxaasi dhaceen. “Dhacdo kasta oo taariikhdaydii ka mid ah oo aan xasuusto waxa aan u xasuusanayaa si waaddix ah oo aan mugdi lahayd lana moodo in aan filin ka daawanayo,” ayay ku catawday. Warqadda ay u soo qortay dhakhtarka iyo kooxdiisa waxa ay ku tidhi: “Xasuusahaygu noloshaydii ayay la wareegeen. Mar kasta tagtadii ayaa aan ka fekeraa. Waa aad moodaysaa muuqaal aan dhammaad lahayn oo la ii daaray… waxa aan ka ku sugnahay xaalad ah, tusaale ahaan, aniga oo kula fadhiya oo arrin kaala hadlaya ayaa haddana ay maskaxdaydu ka fekeraysaa wax dhacay Diseenbar 1982-dii, 17-dii Diseenbar 1982, waxa ay ahayd Jimce, waxa aan shaqo ka bilaabay dukaanka Gs!”
Mudane McGaugh waxa uu daneeyay waxan ay inantu sheeganayso. Kulan iy waraysi in ay wada yeeshaan ayuu ka codsaday, waana ay ka aqbashay. Markii ay kulmeen, ee uu u kuurgalay waxan ay sheegayso, waxa McGaugh u caddaatay in arrintani cusub tahay, runna tahay, in uu derso markii u horraysayna taariikhda ku galo oo uu soo bandhigo ayuu go’aansaday.
Aakhirkii khubaro uu James McGaugh horkacayo ayna weheliyaan Elizabeth Parker iyo Larry Cahill ayaa daabacay warbixin arrinta gabadan ku saabsan. Sannadkii 2006 ayay ahayd, muddadaa lixda gu’ ahba dhabbo-gelidda arrinkan ayay ku qaateen. Waxa ay markii u horraysay adeegsadeen erayga “Hyperthymesia,” oo laga soo dhiraandhiriyay kelmadaha Giriigga ah ee hyper– (badnaan) iyo thymesis (xasuus).
Haweenaydan Price waxa ay xasuusan kartaa ugu yaraan wax kasta oo nolosheedii hore ah, waxaana la odhan karaaba in ay dhakada ka hayso xasuus-qorkeedii!
Maxay tahay Xasuus-badnidu?
Waa xaalad nafsi ah oo qofi ku sugnaado, waxaana lagu astaameeyaa laba sifo, in qofku waqti badan ku lumiyo ka-fekeridda dhacdooyinkiisii tegey iyo in uu soo bandhigo warbixinno waafi ah oo aan caadi ahayn oo la xidhiidha xasuusaha uu dib ugu noqonayo. (McGaugh; Parker; Cahill, 2006).
Markii ay wadeen baadhitaanka, ayay kooxda McGaugh waxa ay wayddiiyeen gabadhan Price ah dhawr su’aalood oo la xidhiidha tagtadii. Sidii hilaad-tuska ayay uga jawaabaysay. Markii danbe si deraasadda looga aammin-yeelo xaglin iyo madmadow, loona tirtiro shakiga ah in asal ahaanteeda ay gabadhani iskaga xasuus fiican tahay, ayaa waxa loo yeedhiyay dhawr tiro, waxaana laga codsaday in ay ka baxdo tirooyinkii loo yeedhshay si loo hubiyo in ay qaybtay iyo in kale. Waxa amakaagga noqday ayaa ah in 52-kii tiro ee loo yeedhiyayba ay keliya ka qabatay 7 ka mid ah! Tan micnaheedu waxa weeye in ay qaybtay ~13.5% tirooyinkii loo yeedhshay.
Sawir maskaxda aadanaha ah oo jeebis-gudub loo taswiiray, muujinayana labada goobood ee qoraalka ku xusan
Maskaxda Price ayaa la mariyay mashiinka MRI. Waxa soo baxday in maskaxdeedu leedahay caudate nuclei iyo qayb ka mid ah temporal lobe. Waxa ay natiijadu sheegaysay in labadaa goobood ee maskaxda ahi si aan la filayn u ballaadhan yihiin. Labada meeloodba waa ay saamayn ku leeyihiin xasuusta. Qaybta hore ee bu’da ahi waxa ay qaabbilsan tahay xasuusaha u kaydsama qaab kama’ ah oo aan lagaba fekerin. Maskax-garaadka (conscious mind) ayaa ay xidhiidh leeyihiin. Qaybta labaad ee temporal lobe (Duubka Taariikhda) waxa ay iyana muhiim u tahay kaydinta xogaha, xaqiiqooyinka iyo tirooyinka taariikhaha. Aragti uu halkan ka soo dheegay Cahill, oo ka tirsan kooxdu, ayaa ayidaysa in sababta keentay xasuustan fawqal caadiga ahi tahay wadashaqayn weyn oo ka dhexeeya labadan qaybood gudaha maskaxda marwo Price iyo cid kasta oo xaaladdan ku jirta, tan oo keenaysa in dhacdooyinka loo kaydiyo si iskaa-wadid (automatic) ah. Waxa xiisaha samaynaya ayaa ah in aan hore loo arkin wadashaqayn ka dhaxaysa labadan goobood ee maskaxda ah oo heerkaa gaadhsiisan.
Muuqaalka jeldiga buugga
Bishii May 2009-kii ayaa ay marwo Price iyo Bart Davis ay wada qoreen buug loogu magacdaray, “Gabadha aan Waxba Illaawin– The Woman Who Can’t Forget.” Waa buug kaaga sheekaynaya taariikhdii iyo duruufihii ku gedaamnayd xaaladdan dunida sayniska ku cusbayd ee xasuus-badnaanta iyo kiiskii u horreeyay ee Jill Price.
Maanta marwo Jill Price keli kuma aha xaaladdan. Laga soo bilaabo 2006-dii, waxa McGuagh iyo kooxdiisa la soo xidhiidhay dad door ah oo isla xaaladdan ka cabanaya.
Gebagebadii, qof ahaan waa ay i soo jiiteen sheekooyinka laga qoray xaaladdani. Dersid badan markii aan ku sameeyayna, waxa aan u arkayaa in ay tahay cillad – (Syndrome) haddii ay qofka werwer tagtadiisii ah ku keento, mar kalana ay tahay maquuno – (gift) haddii ay qofka u tahay xasuus-qor maskaxda uu ku haysto. Adiga, akhriste ahaanna, waa aan kuu dhaafayaa in aad weelayntaada iyo qiimayntaada gaarka ah samaysid.
Previous Si aad Buugaag Badan u Akhridid 2016-ka…
Next Kala-duwanaanshaha Aragtiyeed: U-dhalasho mise Iska-dhigid?